Iyo itsva vhezheni yeWhonix 16 yakatoburitswa uye inouya zvichibva paDebian 11 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeWhonix 16 yakatoburitswa kare uye imwe yemabhaisikopo ayo makuru ndiko kuchinja kwesisekelo iko zvino Debian 11 iyo ine huwandu hukuru hwepakeji mapakeji akagadziridzwa.
Kune avo vasingazive nezvekuparadzirwa, ndinogona kukuudza kuti ndizvo hurongwa hwakagadzirirwa kusazivikanwa yakavimbiswa, kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kwemashoko akavanzika. Kugovera kunoenderana neDebian GNU / Linux uye inoshandisa Tor kuona kusazivikanwa.
Hunhu hweWhonix ndiyo kupatsanurwa kwekugoverwa muzvikamu zviviri yakaiswa zvakasiyana: Whonix-Gedhi pamwe nekumisikidzwa kwe network network gedhi rekusazivikanwa kutaurirana uye Whonix-Kushanda nedhesiki.
Zvese zviri zviviri zvinhu kutumirwa mukati meimwe bhutsu mufananidzo. Network kuwana kubva kuWhonix-Workstation nharaunda iri kuburikidza neWhonix-Gateway chete, iyo inosarudzika nharaunda yebasa kubva mukubatana kwakananga nenyika yekunze uye inobvumira chete enhema network kero kuti ishandiswe.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Zvikamu zveWhonix zvakagadzirirwa kumhanya senzira dzevaenziMune mamwe mazwi, iko mukana wekushandisa zvakakomba zero-zuva kusagadzikana mumapuratifomu ekuona anogona kupa mukana kune inomiririra system haina kusiiwa. Naizvozvo, hazvikurudzirwe kumhanyisa Whonix-Workstation pakombuta imwechete seWhonix-Gateway.
1 Zvinyorwa zvitsva zveWhonix 16
2 Dhawunirodha Whonix 16
Zvinyorwa zvitsva zveWhonix 16
Mune iyi vhezheni itsva yesisitimu, hwaro hwepakeji ye kugoverwa kwakagadziridzwa kubva kuDebian 10 (mabhesi) kuna Debian 11 (bullseye) pamwe chete nazvo nhamba hombe yemapakeji akatamira kune iyi nyowani vhezheni uye zvekare semuenzaniso ndiyo yekuisa yekuisa Tor iyo yakachinjwa kubva ku deb.torproject.org kuita mapakeji.debian.org.
Pakave zvakare nekuvandudzwa kubva kuWhonix-Gateway 15 uye Whonix-Workstation 15 (ese ane Xfce) ayo akavakirwa paDebian buster kuenda kuWhonix-Gateway 16 uye Whonix-Workstation 16 kuzasi kweDebian 11 bullseye.
Iyo binaries-rusununguko pasuru yadzikiswa, sezvo electrum yave kuwanikwa mune yakajairwa Debian repository, nepo flashproxy-client uye fteproxy vabviswa kubva kuWhonix-Gateway, se yakadzikiswa muDebian bullseye.
Iyo yekukurumidza kurodha (fasttrack.debian.net) inogoneswa nekutadza Kubudikidza iyo iwe yaunogona kuisa yazvino vhezheni yeGitlab, VirtualBox uye Matrix, kuwedzera kune backports repository inogoneswawo nekutadza
Iyo apt python-qt4 inoshanda bvunzo pasuru yakatsiviwa nano sezvo python-qt4 inoisa akawandisa mapakeji, kutsamira uye nano yakaiswa nekumira.
VirtualBox muenzi anowedzera mugadziri akachinjwa kutanga kushandiswa kwechido-kumirira panzvimbo pechido-noawait, kubvira pakutanga apo iyo virtualbox muyenzi-yekuwedzera mufananidzo wakagadziridzwa panguva imwechete sevm-config-dist iyo trigger haina kumhanya.
Iyo faira nzira yakagadziridzwa kubva / usr / lib kuenda / usr / libexec.
VirtualBox yakagadziridzwa kune vhezheni 6.1.26 kubva kuDebian repository.
Iyo nzira inoenda kune peji rekumba reiyo browser yemuno yakagadziridzwa zvakare.
Kuenderana neLKRG v0.9.1
Obfs4proxy uye firefox-esr yakawedzerwa
Otomatiki LKRG doko inoenderana marongero eVirtualBox inomiririra kubva
systemd kune dpkg inotangisa
gadziridza LKRG VirtualBox inomisikidza gadziriso
Pamberi chiteshi kuburitswa gadziridzo inowedzera
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo yeiyi vhezheni itsva, unogona kutarisa rondedzero izere yeshanduko Mune inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Whonix 16
Kune avo vanofarira kugona kuyedza system, vanofanirwa kuziva kuti iyo Whonix bhuti mifananidzo yakagadzirirwa kumhanya pasi pekutonga kweKVM hypervisor.
Pamusoro pekuti izvo zvenguva (yekutsikisa) iyo inovaka yeVirtualBox uye yekushandisa muQubes inoshanda sisitimu inononoka (nepo iyo Whonix 16 bvunzo ichivaka ichienderera ichitumira).
Uye kune avo vanoda kuenzaniswa kweWhonix neMiswe, Tor Browser, Qubes OS TorVM, unogona tsvaga pane ino peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo itsva vhezheni yeWhonix 16 yakatoburitswa uye inouya zvichibva paDebian 11